Izinhlobo brake calipers
Izipikili zamabhuleki ezithuthuthu Izithuthuthu zincane kunezimoto, ngakho-ke zidinga amandla amancane wamabhuleki. Yize kunjalo, ngandlela thile, ikhono lesithuthuthu ukwehlisa ijubane noma lokuma libaluleke kakhulu kunezinye izimoto. Ungase ukubuze lokho? Yebo, ngisho nama-bend fender amancane angabulala ngoba umshayeli akekho ...
Isimiso sokusebenza se-brake caliper
I-brake caliper ibaluleke kakhulu ekhonweni le-braking lemoto, futhi kungashiwo ukuthi ingesinye sezingxenye ezibaluleke kakhulu zokubhabha imoto. Kunoma ikuphi, izimoto eziningi namuhla zinama-disc brake, okungenani amasondo angaphambili. Kodwa manje izimoto eziningi namaloli asebenzisa ama-disc brakes ngemuva. Kwi...